Pocophone F2 Pro: 6,67-inch ihuenyo, Snapdragon 865 na interface ya | Gam akporosis
Pocophone F2 Pro bụ nzọ ọhụrụ na ahịa ụlọ ọrụ ahụ, onye gosipụtara na ngwaọrụ ahụ ga-abata na ike Snapdragon 865 processor, CPU kachasị ike ugbu a n'ahịa. Maka nke a, ọ dị mkpa ikwu na ọ na-etinye obi jụrụ nke sitere na ime ụlọ ụgbọ mmiri wee kpọọ LiquidCool 2.0.
Ekwentị ga-agụnye batrị 4.700 mAh nke nwere ike iru ụbọchị abụọ, ihe dị mkpa maka ịbụ ihe dị mkpa maka ndị na-achọ ọnụ na nnwere onwe dị mma, mana na-enweghị ileghara ike nke mgbawa ahụ. Chaja ga-enye 100% ike na Pocophone F2 Pro na naanị 63 nkeji, a obere ihe karịrị otu awa na-abata na a 33W ngwa ngwa ụgwọ.
1 Nkọwapụta ndị ọzọ nke Pocophone F2 Pro ọhụrụ
2 Igwefoto azụ anọ na ọtụtụ ndị ọzọ
Nkọwapụta ndị ọzọ nke Pocophone F2 Pro ọhụrụ
Ugbu a ha na-ekwu banyere ọsọ nke ebe nchekwa ahụ, nke ga-abụ nke ụdị LPDDR5 na nsụgharị abụọ: 6 na 8 GB, ebe nchekwa ahụ na-anọgide na 128 na 256 GB na ọsọ nke UFS 3.1 iji ruo oge. Poco F2 Pro ga-enwe nnukwu ihuenyo 6,67-anụ ọhịa AMdị AMOLED, na-enweghị ọkwa ọhụụ, ga-eji teknụzụ HDR10 +, ihe nlele ngosi 180 Hz na moto vibration Z-Axis.
Emeputa ahọrọla ọhụrụ version nke Android 10 nwere POCO Launcher 2.0 interface, nke gunyere drawer iji chekwaa ngwa nke anyi anyi n’usoro. Ọ na-agụnye a search mmanya n'okpuru iji chọta ọ bụla ngwa na dị nnọọ ole na ole sekọnd.
Igwefoto azụ anọ na ọtụtụ ndị ọzọ
Pocophone F2 Pro jikọtara ihe mmetụta Sony kachasị ọhụrụ, ihe atụ 686 MP IMX64 nke eji edekọ vidiyo na 8K, nke abụọ bụ ogo 123 n'ogologo, oghere nke atọ bụ nnukwu MP 5 na nke anọ bụ ihe mmetụta miri emi nke 2 MP. Ihe ohuru bu na otu POCO ga-emejuputa igwefoto selfie-type nke 20 MP, ihe ohuru di nma iji nwee obi uto na uzu.
Otu isi na ihu ọma ya iji nwee ike ịchaji batrị ga-adọta mmiri jụrụ oyi na eserese mgbe ọ dị mkpa, ha niile nwere ike ịghasa ọkụ batrị ahụ. N'oge na-adịghị ama Pocophone F2 Pro ọ overheats dị ka ọ na-eme ndị dị iche iche ọnụ.
Ohere TERLỌ N'IME 128/256GB UFS 3.1
Dị 6/128 GB ga-efu euro 499, mgbe 8/256 GB ga-aga 599 euro, ihe dị ka euro 100 nke ihe dị iche maka ịwelite ebe nchekwa na nchekwa. Ọ dị ugbu a n'usoro n'usoro n'ọnụ ụzọ ama ama dịka Amazon, AliExpress na Gearbest ruo agba anọ: isi awọ gbara ọchịchịrị, odo odo, acha anụnụ anụnụ na ọcha.
Mbupu nke ngwaọrụ ndị ahụ ga - ebido na Mee 19, ihe mbụ ga - amalite ime ndoputa (taa May 12), na ihe niile na - egosi na a ga - ezuru ịhụ nnukwu nnabata nke Pocophone F1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Pocophone F2 Pro: 6,67-inch ihuenyo, Snapdragon 865 na interface ya